Othole Ithenda Lika-R176 Million Usebenzise u-R15m Kuphela - Gagasi World
Written by Mfundo on 10 September, 2021
Uphiko oluphenya ubugebengu obuhleliwe, iSpecial investigating Unit, (SIU) ithi inkulu imali abathole ukuthi yayikhishelwe ukuthengwa kwama-PPE emnyangweni wezempilo, ebonakala ingena kusomabhizinisi uHamilton Ndlovu.
U-Ndlovu wabonakala okokuqala ngqa efake izimoto zakhe zikanokusho ezinkundleni zokuxhuma, nokwashiya imibuzo eminingi kubantu bakuleli.
Losomabhizinisi usolwa ngokuhlomula ngethenda ka-R176 million ngendlela engaqondakali, nokubonakala ukuthi wasebenzisa uR15 million kuphela ukutehenga amaPPE’s enye inxenye yemali ingene kubhange lakhe.
I-SIU iphinde yathola nokuthi uR32 million kuleyomali uthenge imizi emine kwasekuthi uR10 million wafakwa ku-Trust yommeli wakhe.
Oyisikhulumi se-SIU uKaizer Kganyago uthi unethemba lokuthi uphenyo lwabo luzoholela ekutheni ibuye yonke imali enikezwe uNdlovu kungafanele.
Zuma, Elections & Marikana – Malema